रिमा र निराजन भन्दै छन्- उडेर जाऊँ
फरकधार / असार २७, २०७६
काठमाडौं– देशको ५० लाख बढी जनसंख्या विदेशमा छ । सानो देशबाट ठूलो सपना बोकेर विदेशिएका नेपालीका आ–आफनै सपना छन् । कला र संगीतमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गर्दागर्दै अधुरो रहेको सपना पूरा गर्ने इच्छा कता–कता एउटा कलाकार सर्जकको मनमा सधैँ हुन्छ ।
करिब ३ वर्ष अघि सरिता लिङ्देनले आफ्नो डायरीमा लेखेर राखेको गीतले नयाँ जीवन पाएको छ। ‘उडेर जाऊँ’ बोलको रोमान्टिक गीतमा चर्चित गायिका अन्जु पन्तले स्वर दिएकी छिन् । गीतमा संगीत मन्जुल मितेरीको छ । गीतको संगीत संयोजन बादल लिम्बूले गरेका हुन् ।
लभ रोमान्सको भावमा प्रस्तुत गरिएको यस भिडियोमा नायिका तथा रिमा विश्वकर्मा र निराजन प्रधानलाई प्रेमजोडीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। राम कुमार केसीले खिचेको भिडियोलाई भुपेन्द्र अधिकारीले सम्पादन गरेका हुन् । सरिता लिङ्देन प्रस्तुतकर्ता रहेकोे म्युजिक भिडियोलाई सत्य राज चौलागाईंले निर्देशन गरेका हुन् ।
के रणवीरको प्रेममा परेकी छिन् वाणी ?
फरक धार | असोज २४, २०७६
साहरुखलाई थप अर्को उपलब्धि
उदित नारायणका छोराले घरमा गर्लफ्रेन्ड ल्याएपछि...
कपिलको कार्यक्रममा विहे गरे गोविन्दाले !
‘बिग बोस’लाई भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने
अभिनेत्री अमिषा पटेललाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गर्ने